कार मिनी पानी अभाव पावर अफको लागि एयर ह्यूमिडिफायर China Manufacturer
विवरण:कारको लागि ह्युमिडिफायर,कारको लागि एयर ह्युमिडिफायर,कार मिनीको लागि ह्युमिडिफायर
Home > उत्पादनहरू > Mini Humidifier > कार मिनी पानी अभाव पावर अफको लागि एयर ह्यूमिडिफायर
तपाईंको कारलाई सुगन्धित OASIS मा बदल्नुहोस्: तपाईंको दिमाग, शरीर र आत्मालाई आराम गर्नुहोस् र तपाईंको इनडोर रिक्त स्थानलाई अद्भुत अरोमाथेरापी ओएसिसमा रूपान्तरण गर्नुहोस् जुन तपाईंको इन्द्रियहरूलाई उत्प्रेरित र जगाउनेछ। कार, ​​SUV, कार्यालय वा घर को लागी उत्तम, यो पोर्टेबल डिफ्यूजरले आवश्यक तेलको फाइदाजनक गुणहरू कुनै पनि सेटि intoमा बिसाउँदछ र तपाईंलाई ताजा, गन्ध रहित वातावरण कायम गर्न मद्दत गर्दछ!
तपाईंको अरोमा डिफ्यूसरलाई जानुहोस्: तपाईंको अत्यधिक सुविधा र दिमागमा सजिलोसँग डिजाइन गरिएको, यो यूएसबी विसारक तपाईंसँग जताततै ल्याउन सजिलो छ। यसको स्मार्ट डिजाइनका लागि धन्यवाद, यो कुनै पनि वाहन कप धारकमा पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ। तपाईले गर्नु पर्ने सबै भनेको सुविधाजनक USB पोर्ट प्रयोग गरेर तपाईको कारमा प्लग गर्नु पर्छ र तपाई तयार हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ! प्रयोग गर्न र सफा गर्न सजिलो, कार डिफ्यूजर बारम्बार यात्रुहरूका लागि हुनुपर्दछ। तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ, मिनी डिफ्यूजरको सामग्री सुरक्षित ठाउँमा रहनेछ जब तपाईं जानुहुन्छ।
बक्स बाहिर प्रयोग गर्नका लागि तयार: प्याकेजमा समावेश गरीन्छ तपाईले युएसबी एडाप्टर पनि भेट्टाउनुहुनेछ, त्यसैले तुरून्त तपाईको डिफ्युजर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केवल युनिटमा प्लग गर्नुहोस्, आवश्यक ट्या of्कीमा २- drops बूँद राख्नुहोस् विशेष ट्या tank्कमा र अन बटन थिच्नुहोस्। अल्ट्रासोनिक अरोमा नेबुलाइजर चाँडै बहुमूल्य तेलहरू अलग गर्न थाल्नेछ र तपाईंको गाडीमा हावा ताजा पार्नेछ। तपाईं दुई धुंध मोड बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ: निरन्तर र अन्तर्निहित धुंध।
१००% सन्तुष्टि ग्यारेन्टीड: तपाईको कार एरोमाथेरापी विसारकलाई मन शान्तिको साथ अर्डर गर्नुहोस्, यो जानेर कि यो पूर्ण सन्तुष्टिको एक वर्षको ग्यारेन्टी हो! तपाईंको लागि एक अर्डर गर्नुहोस् र एक अद्वितीय अरोमाथेरापी अनुभवको मजा लिनुहोस्, तपाईं जहाँ भए पनि!
कारको लागि ह्युमिडिफायर कारको लागि एयर ह्युमिडिफायर कार मिनीको लागि ह्युमिडिफायर घरको लागि ह्युमिडिफायर कोठाको लागि ह्युमिडिफायर घरका लागि ह्युमिडिफायर कारको लागि सानो ह्युमिडिफायर घरको लागि एयर ह्युमिडिफायर